O Temper Marine Grade Aluminium Disk, 1060 Thin Aluminum Sheet Circle - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Teknolojia Co, Ltd
Aoka ho afaka amin'ny alikaola, dendrina, fampidiran-doko, scratches, tain-koditra, fanodinana oksidia, fialana, korrosion, marika fingotra, dona marefo ary kilemaina hafa izay hanelingelina ny fampiasana azy. Aluminium Disc-Sheet tsy misy loko mainty, mofomamy madinidra, tavy peryzika, fanodidinan'ny milina fanontam-pirinty, toy ny gko interne Control hafa.
Ny 1100-0 dia ampiasaina voalohany indrindra amin'ny fanodinana sy ny sary mihetsika lalina toy ny fitaovana, firavaka, sns.
Ny 1100-H14 sy 3003-H14 dia fitambarana fomban-draharaha ampiasaina amin'ny asa fanorenana ankapobeny.
5005-H14 mitovitovy amin'ny toetra ara-batana ho an'ny 3003-H14 miaraka amin'ny fanamafisana ny fiarovan-tena tsara sy ny endriny mahaleotena tsara ho an'ny anodizanina. Ity legioma ity dia mety amin'ny rindrim-baravarankely, ny loko marevaka, ny boaty ary ny marika, sns.
Grade: 1000 Series, 1xxx-, 8xxxSeries
Fampiharana: Automotive, aerospace, indépendance militaire, ligne, construction, printing, Aluminum cookware, pot, kettles, basins, lights and fryers
Ambainy: ambany 900mm
Fomba fitsaboana: vita amin'ny lamba vita amin'ny varotra
Anarana: china mpamatsy alimanina alimo
Ampidiro: 85-750mm, 100-900mm
Parameters an'ny Aluminium Circle / Disc
Product anarana Aluminium Circle / Disc
Fitaovana 1050, 1060, 1100, 1200, 3003,3004,3005,3105,3104,5005,5052,6061.
manalefaka O, H14, H18, H22, H24
surface fitsaboana Mill Finish, Eletropharesis, Powder Coated, Poloney
Color Silver, Black, Red, Blue, or as required
endrika Ny teboka, ny bossed, na ny sary sy ny samples
FABRICATION fanapahana, ary atsofony, punching, hiondrika, sns
fampiharana Fambolena, fiaramanidina, fiaramanidina, famokarana herinaratra, fampitaovana, fiara, fanorenana. sns
Standard Firenena Nasionalin'i Shina GB 3880-2006, ASTM, EN
DC Quality (Deep Drawing) CC qualité
Fonon'ny vilany / Fry pans
Kitapo kesika / Fanaterana fisotroana
Pizza pans / Rice cookers
Kafe urns / elektrômatetika
Bakeware, Mpanao mofo
Takelaka ambanin'ny tany tsy misy ratra Pot lids
High beleuchtung industriell
Fiarovana amin'ny alahelo
Series 1000 Series High Strength Aluminium Discs Circles H22 Temper For Cookware Pot
3003 3105 1060 1100 Aluminium Round Plate, Xold XDXX Series Aluminum Discs Circles
Bright Aluminum Discs, 3003 Deep Drawing Aluminum Discs Circles
1050 Aluminum Circle, 1060 Aluminum Circle, 1100 Aluminum Circle, 3105 Aluminum Circle, 5052 Aluminum Circle, 6061 Aluminum Circle, kodiarana Aluminium ho an'ny pans
High Precision 1060 3003 Aluminium Ronda Disc, H22 Metal Stamping Aluminum Plate